आजको राशिफल Archives - www.kchhakhabar.com
राशिअनुसार मानिसको स्वभाव पनि फरक हुने विश्वास गरिन्छ । ज्योतिषशास्त्रको मान्यताअनुसार राशिकै आधारमा व्यक्तिको स्वभावको मूल्याङ्कन र भविश्य निर्धारण हुन्छ । राशिको स्वभावका आधारमा सम्बन्ध, दोस्ती, प्रेम प्रसङ्ग पनि निर्भर हुन्छ । कतिपयलाई त कोतुहुल्ता होला कुन राशिसंग बिबाह गर्दा राम्रो होला भन्ने कुरा । तपाईको राशिले निर्धारण गर्छ कस्तो साथी पाउनुहुन्छ । मेष राशि जुन मान्छेको राशि मेष हो...
जान्नुहोस् कुन राशिका पुरुषको पत्नी खुसी रहन्छन् : १) कन्या राशिका व्यक्ति ह्याण्डसम देखिन्छन् । जो सुकै केटी यस्ता केटालाई पतिकोरुपमा पाउन चाहान्छन् । यो राशिका व्यक्ति आफ्नी पत्नीलाई धेरै माया गर्छन् । २) सिंह राशिका व्यक्तिसँग केटीहरु आकार्षित हुन्छन् । यो राशि भएका पुरुषले सुन्दर पत्नी भेट्छन् । यीनीहरु आफ्नो साथीसँग धेरै वफदार रहन्छन् । ३) मकर राशिका व्यक्तिहरुको बोली अन्य मानिसहरुको...
ज्योतिषी भाषाअनुसार भन्ने हो भने तपाईहाम्रो जीवन राशिअनुसार चल्छ । तपाईमाथि गृह, नक्षेत्रको के कस्तो प्रभाव परेको छ, यो कुरा राशिले स्वतः दर्शाउँछ । आधुनिक युगमा जीइरहेकाले हामी ज्योतिषीसँग खासै सरोकार राख्दैनौं । तर, सत्य यो पनि हो कि जो समस्या जोतिषीद्वारा हल गरिन्छ, त्यो अन्य उपायबाट समाधान हुन सक्दैन । कुनै पनि व्यक्ति कस्तो होला ? जस्तो देखिन्छ के वास्तवमै त्यो व्यक्ति त्यस्तो होला ? यी सब...
ज्योतिषको आधारमा आज हामी तपाईंलाई शरिरका यस्तो स्थान बताउँदैछौं जहाँ कोठी हुनु निकै राम्रो र शुभ मानिन्छ । १. भाग्यको कोठीः मानव शरिरमा प्राकृतिक रुपमा विभिन्न स्थानमा कोठी हुने गर्दछन् । केही मानिसहरुलाई शरिरको यो कोठी निकै राम्रो लाग्छ भने कतिलाई यस्तो कोठी घृणा लाग्छन् । तर कोठी कुन स्थानमा हुन्छ, त्यसले भाग्यलाई पनि दर्साउँछ । ज्योतिषको आधारमा आज हामी तपाईंलाई यस्ता केही स्थानबारे जानकार...
ज्योतिष पण्डित डा. सुनिल सिटौला द्रिक सिद्धान्त गणित अनुसार काठमाडौंमा मंगलवार बिहान ७ बजेर ४१ मिनेटदेखी बुधबार बिहान ५ बजेर ३ मिनेटसम्म प्रतिपदा तिथी रह्यो। यहाँ प्रतिपदा तिथी क्षय भएको हुँदा प्रसिद्ध ग्रन्थ निर्णय सिन्धु अनुसार मंगलवार नै नवसंवत्सर आरम्भ भएको मान्नुपर्ने हुन्छ। सम्वत्सर गणित अनुसार २०७४ साल साधारण नामको सम्वत्सर रहने छ। लौकिक ज्योतिष (Mundane Astrology) अनुसार २०७४ सालको शुभ ...